Ikhabhinethi yabantu aba-4 kufuphi neCuracautín
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguJean Paul
Ikhabhinethi yabantu aba-1 ukuya kwaba-4 kwisiza sentsapho esikwindawo yasemaphandleni ezolileyo nekhuselekileyo kwindawo yendalo ngokupheleleyo. Lo mhlaba unehektare e-1 yolwandiso kwaye ibekwe kwiimitha ezingama-400 ukusuka kwindlela i-CH-181 apho kukho isithuthi sikawonke-wonke okanye ngesithuthi sakho.
Kufuphi ne "Parque Nacional Conguillio" (iPaki yeSizwe yaseConguillio) kunye neekhilomitha ezingama-35 ukusuka kwi-volcano yaseLonquimay, LLaima kunye neTolhuaca kunye neekhilomitha ezingama-45 ukusuka kwi-"Centro de Ski Corralco". IsiNgesi kunye neSpanish zithethwa.
Ikhabhathi ekhululekileyo enebhedi ephindwe kabini kunye nekhabhathi kwiziqwenga ezahlukeneyo. Inamanzi okusela, umbane, uqhagamshelo lwe-Intanethi (Wifi), ifriji, ikhitshi kunye nesitovu seenkuni. Iminyango ezimeleyo kunye neendawo zokuphuma kunye nendawo yokupaka.
Le ndawo ikwindawo yasemaphandleni kwindawo ezolileyo nenoxolo kumgama oziikhilomitha ezili-11 ukusuka kwidolophu yaseCuracautín. Ingqongwe ngamasimi aluhlaza aneegusha neenkomo ezithile.
Umbuki zindwendwe ngu- Jean Paul
Sikunika zonke iintlobo zezalathiso zasimahla (eziprintiweyo kunye nedijithali) ngoncedo lokutyelela ummandla malunga neePaki zeSizwe, iindawo ezinomdla, ulwazi lweVolcano, iiBhafu eziThermal, Iindlela kunye neenketho zothutho ngenjongo yokwenza indawo yokuhlala ekhululekile. Singanxibelelanisa nearhente yokuhamba kwimisebenzi efana ne-Ski, ukukhwela iHashe, ukukhwela iHashe, ukukhwela iKayaking, ukuBukela iiNtaka kunye nokunye okuninzi. Zonke ezi ngcebiso kugxilwe kurhwebo oluphantsi nolulungileyo.
Sikunika zonke iintlobo zezalathiso zasimahla (eziprintiweyo kunye nedijithali) ngoncedo lokutyelela ummandla malunga neePaki zeSizwe, iindawo ezinomdla, ulwazi lweVolcano, iiBhafu…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Malleco